Bit By Bit - agba nwere - 4.5.1.1 Iji ẹdude gburugburu
Ị nwere ike na-agba ọsọ nwere n'ime ẹdude gburugburu, mgbe mgbe na-enweghị ihe ọ bụla nzuzo ma ọ bụ mmekọrịta.
Logistically, ndị kacha ụzọ mee digital nwere bụ machie gị nnwale n'elu otu dị na gburugburu ebe obibi, na-eme ka ị na-agba ọsọ a digital ubi nnwale. Ndị a nwere ike ga-agba ọsọ na a ezi uche n'ìgwè nakwa anaghị achọ mmekorita ya na a ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọtụtụ software mmepe.
Dị ka ihe atụ, Jennifer Doleac na Luke Stein (2013) ji ihe ihe online n'ọma ahịa (eg, craigslist) na-agba ọsọ nnwale na tụrụ ịkpa ókè agbụrụ. Doleac na Stein advertised ọtụtụ puku iPods, na site n'usoro ná mgbanwe ndị e ji mara na-ere ere, ha na-amụ mmetụta nke agbụrụ na aku na uba na azụmahịa. Ọzọkwa, Doleac na Stein eji ọnụ ọgụgụ nke ha na nnwale na-eme atụmatụ mgbe mmetụta bụ ibu (heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta) na-enye ụfọdụ echiche banyere ihe mere mmetụta nwere ike ime (usoro).
Tupu ọmụmụ nke Doleac na Stein, na e nwere isi ihe abụọ na-abịaru nso ka experimentally atụ ịkpa ókè. Na akwụkwọ ozi ọmụmụ na-eme nnyocha ike malitegharịa nke fictional ndị dị iche iche agbụrụ na-eji ihe ndị a malitegharịa ka ihe atụ, ide maka dị iche iche ọrụ. Bertrand na Mullainathan si (2004) akwụkwọ na-agaghị echefu echefu aha "Ọ bụ Emily na Greg More aru Than Lakisha na Jamal? A Field Nnwale on Labor Market ikpa oke "bụ a magburu onwe atụ nke a akwụkwọ ozi ọmụmụ. Akwụkwọ ozi na ọmụmụ nwere dịtụ ala na-eri kwa chọpụtara, nke na-enyere otu onye nchọpụta na-anakọta ọtụtụ puku kwuru na a typical ọmụmụ. Ma, akwụkwọ ozi ọmụmụ ịkpa ókè agbụrụ kpatara e ajụjụ n'ihi aha nwere egosi ọtụtụ ihe na mgbakwunye na nke agbụrụ nke ocho oru. Ya bụ, aha dị ka Greg, Emily, Lakisha, na Jamal nwere ike mgbaama-elekọta mmadụ na klas na mgbakwunye na ọsọ. N'ihi ya, ihe dị iche na ọgwụgwọ maka malitegharịa nke Greg si na Jamal si nwere ike ịbụ n'ihi na ihe karịrị ekekerede agbụrụ iche nke na-achọ ịbata. Oditi ọmụmụ, na aka nke ọzọ, na-agụnye ego-eme ihe nkiri sitere n'agbụrụ itinye na onye ọrụ. Ọ bụ ezie na oditi ọmụmụ na-enye a doro anya mgbaàmà nke ocho oru agbụrụ, ha bụ oké ọnụ kwa chọpụtara, nke pụtara na ha a na naanị nwere ọtụtụ narị kwuru anya.
Ha digital ubi nnwale, Doleac na Stein na-enwe ike ịmepụta mara mma ngwakọ. Ha bụ ike na-anakọta data na dịtụ ala na-eri kwa chọpụtara ihe ọ puku kwuru (dị ka a akwụkwọ ozi amụ) kpọkwara ya, ha na-egosi agbụrụ na iji foto-dapụtara na a doo anya uncounfounded mgbaàmà nke agbụrụ (dị ka na ihe oditi ọmụmụ ). N'ihi ya, online gburugburu ebe obibi mgbe ụfọdụ enyere-eme nnyocha ike ọhụrụ e si agwọ ọrịa na-enwe Njirimara na-esi ike rụọ ma ọ bụghị.
The iPod mgbasa ozi nke Doleac na Stein-iche tinyere atọ isi akụkụ. Mbụ, ha dịgasị iche àgwà nke na-ere ákwà, nke e si gbaa àmà site n'aka photographed na-ejide iPod [na-acha ọcha, nwa, na-acha ọcha na igbu egbugbu] (ọgụgụ 4.12). Nke abụọ, ha iche iche na-arịọ price [$ 90, $ 110, $ 130]. Nke atọ, ha iche iche na àgwà nke ndị ad ederede [elu-edu na ala-edu (eg, capitalization njehie na spelin njehie)]. N'ihi ya, ndị dere nwere a 3 X 3 X 2 imewe nke e gbapụ gafee ihe karịrị 300 ahịa sitere na site na obodo nta (eg, Kokomo, IN na North Platte, ne) na mega-obodo (eg, New York na Los Angeles).
Chepụta 4.12: Aka-eji na nnwale nke Doleac and Stein (2013) . iPods e resịrị site ere ákwà dị iche iche e ji mara tụọ ịkpa ókè na-online n'ọma ahịa.
Kwa, nkezi gafee niile na ọnọdụ, a ga esi ka mma maka na-acha ọcha na-ere ákwà karịa nwa na-ere ákwà, na ndị e ji egbugbu na-ere ákwà na-enwe n'etiti ya pụta. Dị ka ihe atụ, na-acha ọcha na-ere ákwà natara ihe ahụ na-enye ma na elu ikpeazụ ire ere ahịa. Beyond ndị a nkezi mmetụta, Doleac na Stein na-eme atụmatụ na heterogeneity nke mmetụta. Dị ka ihe atụ, otu amụma si na mbụ Ozizi bụ na ịkpa ókè ga-abụ obere na ahịa ya, bụ ndị asọmpi. Na iji ọnụ ọgụgụ nke na-enye nyere dị ka a zighachi akwụkwọ nnọchiteanya maka ahịa mpi, ndị dere chọpụtara na nwa-ere ákwà n'ezie na-enweta njọ enye ke ahịa na ala ogo mpi. Ọzọkwa, site n'iji ga esi maka mgbasa ozi na elu-edu na ala-edu ederede, Doleac na Stein chọpụtara na ad àgwà adịghị mmetụta mwepu chere ihu nwa na-egbugbu ere ákwà. N'ikpeazụ, na-aghọgbu eziokwu na mgbasa ozi e enịm ke ihe karịrị 300 ahịa, ndị dere ahụ na nwa na-ere ákwà ndị ọzọ disadvantaged na obodo na elu nke ime mpụ na elu residential segregation. Ọ dịghị onye n'ime ndị a na ya pụta na-enye anyị a kpọmkwem nghọta nke kpọmkwem ihe mere nwa-ere ákwà nwere njọ ga esi, ma, mgbe jikọtara na ihe ndị ọzọ ọmụmụ, ha nwere ike na-amalite na-agwa chepụtara banyere ndị na-akpata ịkpa ókè agbụrụ kpatara na dị iche iche nke aku na uba na azụmahịa.
Ihe atụ ọzọ na-egosi ikike nke na-eme nnyocha na-akpa àgwà digital ubi nwere na ẹdude usoro bụ research site Arnout van de Rijt na ibe (2014) on mkpịsị ugodi nke ọma. Na ọtụtụ akụkụ nke ndụ, yiri yiri ndị ejedebe na ihe dị iche a ga esi. One kwere omume nkọwa maka nke a nlereanya bụ na obere-na nnoo random-uru nwere ike igbachi-in na eto n'otu, a usoro na-eme nnyocha na-akpọ cumulative uru. Iji chọpụta ma obere mbụ Mmeri igbachi-na ma ọ bụ agwụ ndị, van de Rijt na ibe (2014) na-etinye aka n'ime anọ dị iche iche na usoro bestowing ịga nke ọma on enweghị usoro họrọ sonyere, wee tụọ ogologo oge mmetụta nke a aka ike ịga nke ọma.
More kpọmkwem, van de Rijt na ndị ọrụ ibe 1) ekwele nkwa ego na-enweghị usoro họrọ oru ngo on kickstarter.com , a crowdfunding website; 2) ghaghị gosiri enweghị usoro họrọ reviews na weebụ epinions ; 3) nyere awards na-enweghị usoro họọrọ nkwado ka Wikipedia ; na 4) bịanyere aka enweghị usoro họrọ arịrịọ on change.org . -Eme nchọpụta chọpụtara yiri nnọọ pụta gafee niile anọ usoro: na nke ọ bụla, ndị na-enweghị usoro nyere ụfọdụ n'oge ịga nke ọma wee nwee ihe ịga nke ọma ụdi karịa ha n'ụzọ ndị ọzọ kpamkpam indistinguishable ọgbọ (ọgụgụ 4.13). Eziokwu ahụ bụ na otú ahụ pụtara ọtụtụ usoro enwekwu ndị mpụga ndaba nke a pụta n'ihi na ọ na-ebelata ohere na ụkpụrụ a bụ ihe artifact nke ọ bụla usoro.
Chepụta 4.13: Ogologo oge mmetụta nke enweghị usoro onyere ịga nke ọma na anọ dị iche iche na-elekọta mmadụ na usoro. Arnout van de Rijt na ibe (2014) 1) ekwele nkwa ego na-enweghị usoro họrọ oru ngo on kickstarter.com , a crowdfunding website; 2) ghaghị gosiri enweghị usoro họrọ reviews na weebụ epinions ; 3) nyere awards na-enweghị usoro họọrọ nkwado ka Wikipedia ; na 4) bịanyere aka enweghị usoro họrọ arịrịọ on change.org .
Ọnụ, abụọ ndị a gosiri na ndị nchọpụta nwere ike iduzi digital ubi nwere na-enweghị mkpa na onye òtù ọlụlụ na ụlọ ọrụ ma ọ bụ mkpa na-ewu mgbagwoju digital usoro. Ọzọkwa, Isiokwu 4.2 na-enye ọbụna ihe atụ ndị na-egosi nso nke ihe kwere omume mgbe na-eme nnyocha iji akụrụngwa nke ẹdude usoro iji napụta ọgwụgwọ na / ma ọ ụfọdụ ga esi. Ndị a nwere ndị dịtụ ọnụ ala n'ihi na-eme nnyocha na ha na-enye a elu n'ókè nke nsiridi. Ma, ndị a nwere na-enye na-eme nnyocha ole na-achịkwa ahụ sonyere, agwọ ọrịa, na a ga esi na-tụrụ. Ọzọkwa, maka nwere na-ewere ọnọdụ nanị otu usoro, nnyocha mkpa na-enwe nchegbu na mmetụta nwere ike chụpụrụ site usoro-kpọmkwem Ọnọdụ (eg, n'ụzọ Kickstarter kwubara otutu oru ngo ma ọ bụ n'ụzọ na change.org kwubara na-arịọ; maka ozi ndị ọzọ, -ahụ ụka banyere algorithmic etinye ke Ibuot 2). N'ikpeazụ, mgbe na-eme nnyocha itinye onu na-arụ ọrụ na usoro, tricky usoro ziri ezi ajụjụ iputa banyere nsogbu nwere ike ịpụta sonyere, na-abụghị ndị sonyere, na usoro. Anyị ga-atụle usoro ziri ezi ajụjụ ọzọ nju n'Isi nke 6, e nwekwara ihe magburu onwe ntụle nke ha na ihe odide ntụkwasị nke van de Rijt (2014) . The ahia-offs na-eso na-arụ ọrụ na otu dị na usoro na-adịghị mma n'ihi na ọ bụla oru ngo, na n'ihi na ihe mere ụfọdụ ndị nnyocha na-ewu ha ibuo usoro, na isiokwu nke na-esote ngalaba.
Isiokwu 4.2: Ihe Nlereanya nke nwere na ẹdude usoro. Ndị a nwere iyi na-ada atọ isi ige, na a categorization nwere ike inyere gị achọpụta ọzọ ohere maka gị onwe gị nnyocha. Mbụ, e nwere ndị nwere na ime ka ere ma ọ bụ zụta ihe (eg, Doleac and Stein (2013) ). Nke abụọ, e nwere nwere na ime ka anapụta a ọgwụgwọ kpọmkwem sonyere (eg, Restivo and Rijt (2012) ). N'ikpeazụ, e nwere nwere na-agụnye anapụta agwọ ọrịa aka kpọmkwem ihe dị ka arịrịọ (eg, Vaillant et al. (2015) ).
Mmetụta nke barnstars on onyinye iji Wikipedia Restivo and Rijt (2012) ; Restivo and Rijt (2014) ; Rijt et al. (2014)
Mmetụta nke mgbochi na iyi egwu ozi na akpa ókè agbụrụ tweet Munger (2016)
Mmetụta nke auction usoro na-ere price Lucking-Reiley (1999)
Mmetụta nke aha on price na online auctions Resnick et al. (2006)
Mmetụta nke agbụrụ nke na-ere ákwà na-ere nke baseball kaadị on eBay Ayres, Banaji, and Jolls (2015)
Mmetụta nke agbụrụ nke na-ere ákwà na-ere nke iPods Doleac and Stein (2013)
Mmetụta nke agbụrụ nke ọbịa on Airbnb-ebiri Edelman, Luca, and Svirsky (2016)
Mmetụta nke onyinye on ịga nke ọma nke oru ngo on Kickstarter Rijt et al. (2014)
Mmetụta nke agbụrụ na agbụrụ na ụlọ a na-ebiri Hogan and Berry (2011)
Mmetụta nke oma fim on ga-eme n'ọdịnihu ratings on epinions Rijt et al. (2014)
Mmetụta nke edebe ụbọchị izu na ihe ịga nke na-arịọ Vaillant et al. (2015) ; Rijt et al. (2014)